सौर्यमण्डलमा अर्को पृथ्वी रहेको वैज्ञानिकहरूको दाबी, यस्तो छ प्रमाण
शनि टाइटनको चन्द्रमामा वायुमण्डल छ, जुन सौर्यमण्डलको एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह हो ।
शनिको ८२ चन्द्रमाहरू मध्ये सबैभन्दा अद्वितीय टाइटन हो, जसको सतहमा परिदृश्यहरूको प्रमाण छ ।
शनिको चन्द्रमा र पृथ्वीमा धेरै समानताहरू छन् । विभिन्न मौसमहरूमा हुने विश्वव्यापी बालुवा चक्रका कारण टाइटनमा ल्यान्डस्केपहरू बनेका छन् । टाइटनमा नदीहरू, तालहरू र समुद्रहरू छन्, तर यहाँका तालहरूमा विभिन्न पदार्थहरू छन् ।
तरल मिथेनको प्रवाहले टाइटनको सतहलाई बरफमय बनाउँछ, जबकि नाइट्रोजन हावाले बालुवाको टिब्बा बनाउँछ । स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका भूगर्भशास्त्रीहरूले नयाँ अनुसन्धान अध्ययनमा धेरै जानकारी दिएका छन् । उनले टाइटनमा बालुवाका टिब्बा, समतल इत्यादि कसरी बनेको हुन्थ्यो भन्ने बताएका छन् ।
जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नलमा प्रकाशित यो अध्ययनले दुवैको गति चन्द्रमाको सतहमा रहेको मौसम चक्रद्वारा सञ्चालित हुन्छ भन्ने जानकारी दिन्छ ।
यस अध्ययनमा भनिएको छ कि यस प्राकृतिक उपग्रह र पृथ्वीमा धेरै समानताहरू फेला परेको छ । भूवैज्ञानिक र अनुसन्धान वैज्ञानिकहरू अब शनिको चन्द्रमा टाइटनमा जीवन खोजिरहेका छन् ।
वैज्ञानिकहरूले सेडिमेन्टमा अनुसन्धान गरेका छन् । तिनीहरू गोलाकार र साना हुन्छन् र उथले उष्णकटिबंधीय समुद्रहरूमा पाइन्छ । जब क्याल्सियम कार्बोनेट पानीबाट तानिन्छ, सेडिमेन्ट बनाइन्छ र जसले दानाको वरिपरि तह बनाउँछ ।
वैज्ञानिकहरूले टाइटनको दिशा र तिनीहरूको मोडेलसँग सम्बन्धित डेटालाई जोडे, त्यसपछि उनीहरूले पत्ता लगाए कि टाइटनको सतहमा अवस्थित परिदृश्यहरू छन् ।
काठमाडौंमा सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभा शुरू
अमेरिकाको आकाशमा साँच्चै देखिएको हो यूएफओ ? [भिडियोसहित]
संसारभर हरेक दिन एलियन र यूएफओ देखिएको दाबी गरिन्छ । ब्रह्माण्डमा एलियनहरू छन् कि छैनन् ? वैज्ञानिकहरू वर्षौंदेखि यस प्रश्नको जवाफ खोज्दै आएका छन् तर अहिलेसम्म कुनै सफलता पाउन सकेका छैनन् । यसैबीच, अमेर...
चीनले गर्दैछ ६जी प्रविधिमा काम, अमेरिका पर्‍यो निकै पछि (भिडियो)
चीनका अनुसन्धाताहरूले ६जी प्रविधिमा काम गरिरहेका छन् । यसैबीच उनीहरू नयाँ पुस्ताको ताररहित सञ्चारमा चीनलाई अमेरिका तथा अन्य मुलुकभन्दा निकै अगाडि पार्ने गरी डेटा स्ट्रीमिङमा निकै अघि बढिसकेको पाइएको छ । ...
मंगल ग्रहमा देखियो पल्टिरहेको गुलाबी एलियन, यूएफओ विशेषज्ञले गरे चकित पार्ने दाबी
माघ २६, २०७८
वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि मंगल ग्रहमा जीवन खोजिरहेका छन् । नासाले रातो ग्रहको अनुसन्धान गर्न क्युरियोसिटी रोभर पठाएको छ । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सीको यो रोभरले मंगल ग्रहबाट हरेक दिन फोटो र नया...
बेलायतका वैज्ञानिकहरूले बनाए ‘नक्कली सूर्य’ : स्वच्छ ऊर्जा प्रवाह गर्न सकिने
माघ २७, २०७८
बेलायती वैज्ञानिकहरूले नक्कली सूर्य बनाउन सफलता पाएका छन् । सूर्यकै प्रविधि उपयोग गरेर उनीहरूले परमाणु फ्युजन गराउने एक रियाक्टर बनाउन सफलता पाएका हुन् । त्यसबाट अपार ऊर्जा निस्कनेछ । अक्सफोर्ड...
के ब्रह्माण्ड समाप्त हुँदैछ ? नयाँ अध्ययनको यस्तो खुलासा
ब्रह्माण्डमा धेरै रहस्य लुकेका छन् । वैज्ञानिकहरूले समेत यी रहस्यहरुको बारेमा अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । अन्तरिक्ष सधैं मानिसहरूको लागि जिज्ञासाको केन्द्र भएको छ । लाखौं रहस्यहरू अनन्त र असीमित ब्र...
चीनले बनायो रोबोट सर्प, शत्रुको भूउपग्रह एकैछिनमा कच्याककुचुक पार्ने
चीनले अन्तरिक्षमा रोबोट सर्प बनाएको र त्यसले शत्रुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने दाबी गरेको छ । चीनको एक अनुसन्धान टोलीले रोबोटिक सर्प बनाएको हो । त्यसको शक्ति, लचकता र दीर्घायुले अन्तरिक्षमा खोज गर्न मद्दत गर्छ ।&...